Zavakanto & Kolontsaina · Marsa, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Zavakanto & Kolontsaina · Marsa, 2011
Tantara mikasika ny Zavakanto & Kolontsaina tamin'ny Marsa, 2011
Libanona : Fantaro i Ziad Antar, Libaney mpamokatra lahatsary
Libanona 28 Marsa 2011
Fa iza moa ireo Libane mpanakanton'izao vanimpotoama izao? Manodidina ny fanadihadiana anaty aterineto iray eo ampanomanana ary mikasika ny tontolon'ny fisehoana an-tsehatra vao misondrotra ao Libanona, ny bilaogy mpiara-miasa amin'ilay fanadihadiana, Libalel, no manasongadina ireo mpanakanto toa an'ilay Libane mpamokatra lahatsary Ziad Antar. Ziad Antar dia teraka tamin'ny 1978 tao Saïda...
Brezila: Ny Sandan'ny Famatsiana Ara-Bola ny Kolotsaina
Vaovao vao haingana ny hoe navelan'ny Ministeran'ny Kolotsaina Breziliana ilay mpihira malaza Maria Bethânia mba hanangona volaR$ 1.3 tapitrisa tsy tataovan-ketra (ny reais Breziliana iray dia tokony ho US$ 777,000 eo h eo) mba hananganana bilaogin-tononkalo, ary izany dia niteraka hatezeran'ireo mpitoraka bilaogy, ny mpampiasa Twitter sy ireo mafàna fo hafa amin'ny sehatry ny kolotsaina.
Japana: Tetikasa ara-kolontsaina ho fiaraha-mientana noho ny horohorontany
Azia Atsinanana 23 Marsa 2011
Tetikasa ara-kolontsaina miisa telo mifandray no nivoitra vokatry ny fahasimbana naterak'ilay horohoron-tany sy ny tsunami (tondra-drano mahery vaika) izay nianjady ny faritry ny morondrano avaratr'i Japana tamin'ny zoma farany teo dia ny 11 Martsa, taona 2011 izany. Nanporisika ny olona izy ireo teo amin'ny asa ara-kolontsaina sy teo amin'ny famoronana sy fizarana sary famantarana entina hanampiana ireo niharam-boina.
India: Ny Lokon'ny Holi (Fetibe Hindu)
Azia Atsimo 21 Marsa 2011
Anatin'izao oran'ny fisavoritahana izao, angamba mba mila firavoravoana kely izao tontolo izao, ary inona no tsara indrindra miohatra amin'ny loko marevaka sy manjelatry ny Holi, ny fetin'ny lohataona, ho fanavaozana ny faniriantsika, ny fanantenana ary ny fifaliana.
Japana: Sarimiaina Manazava ny Olan'ny Nokleary Amin'izao Fotoana
Azia Atsinanana 17 Marsa 2011
Namorona lahatsary miaina ilay mpanakanto Kazuko Hachiya (八谷和彦) mba hanazavana ny toe-draharaha any amin'ny ozinina mpikirakira ny nokleary ao Fukushima.
Arzantina: 35 taona Aty Aoriana, Ho Ela Velona Anie Ny Fetibe Karnavaly!
Amerika Latina 17 Marsa 2011
35 taona aty aoriana, miverina indray ny fankalazana ny fetiben'i Arzantina, ary noho izany dia misy ny fifaliana sy firavoravoana. Ny 7 sy 8 Martsa dia nankafy ny fialantsasatry ny fetibe ireo Arzantina rehetra, maro ireo zavatra mbola tsy fahita hatr'izay.
Fanehoam-pitiavana ny teny Portigey amin'ny endriny isan-karazany
Afrika Mainty 10 Marsa 2011
Tamin'ny 21 Febroary 21 , nahatsiaro ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tenindreny ny Global Voices miteny Portigey miaraka amin'ny fandraisana anjara amin'ny pitsopitsony amin'ny fahasamihafana ara-pitenenana sy ara-kolotsaina. Vakio ny fandinihan'ny tontolon'ny bilaogy eo amin'ny boky tantara voalohany natokana ho an'ny teny Portigey, Milagrário Pessoal - asasoratra vao haingana novokarin'ny mpanoratra Angolezy José Eduardo Agualusa.